स्पर्स लघुवित्तको लोभलाग्दो प्रगति; खुद नाफामा १५२३३% को भारी छलाङ, जगेडा कोष रु. १.५८ करोड पुग्यो
काठमाण्डौ । प्रमुख वित्तीय सूचकहरुमा छलाङ मार्दै स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५२३३.०७ प्रतिशतले खुद नाफामा भारी बढोत्तरी गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमास वितरणअनुसार संस्थाले खुद नाफा १ करोड ५६ लाख आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो वर्ष संस्थाको खुद नाफा १ लाख १ हजार रुपैयाँमा...
सानिमा बैंकले २०% सम्म लाभांश बाँड्न सक्ने, खुद नाफा ३२.१५% ले बढोत्तरी
काठमाण्डौ । प्रमुख वित्तीय सूचकमा सुधार गर्दै सानिमा बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २०.३१ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्म बैंकले १ अर्ब ६२ करोड वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको हो । बैंकले समीक्षा अवधिमा २ अर्ब २४ करोड खुद नाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद...
काठमाण्डौ । समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४९.३२ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । चौथो त्रैमास विवरणअनुसार संस्थाले समीक्षा अवधिमा खुद नाफा २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा संस्थाले ७३ लाख रुपैयाँमात्र खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । यो...
काठमाण्डौ । स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९७.१८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । चौथो त्रैमास विवरणअनुसार संस्थाले समीक्षा अवधिमा खुद नाफा ७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा संस्थाले ३ करोड ३३ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको थियो...
काठमाण्डौ । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५३.२० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । चौथो त्रैमास विवरणअनुसार संस्थाले समीक्षा अवधिमा खुद नाफा ३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा संस्थाले १ करोड १० लाख खुद नाफा आर्जन गरेको थियो...
सिर्जना फाइनान्सको खुद नाफामा २९.८७% ले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी रु. ३४.१४
काठमाण्डौ । सिर्जना फाइनान्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २९.८७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । चौथो त्रैमास विवरणअनुसार संस्थाले समीक्षा अवधिमा खुद नाफा १५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा संस्थाले १२ करोड ११ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । त्यस्तै...
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको नाफा ३३३.१९ प्रतिशतले वृद्धि, प्रतिसेयर नेटवर्थ रु. १७५
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खुद नाफा ३३३.१९ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । चौथो त्रैमास वितरण संस्थाले समीक्षा अवधिमा खुद नाफा ६ करोड ८० लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा संस्थाले १ करोड ५७ लाख खुद नाफा गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा संस्थाले खुद ब्याज आम्दानी...
जनसेवी लघुवित्तको खुद नाफामा २७९.५७%को छलाङ, रिजर्बमा ३३८.७०%ले बढोत्तरी
काठमाण्डौ । जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खुद नाफा २७९.५७ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । चौथो त्रैमास वितरणअनुसार संस्थाले समीक्षा अवधिमा खुद नाफा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा संस्थाले ३८ लाख रुपैयाँमात्र खुद नाफा गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा...
एनएमबी लघुवित्तको खुद नाफामा ८६.४५% को बढोत्तरी, इपीएस रु. ३७.६४
काठमाण्डौ । एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमास वितरणअनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८६.४६ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । चौथो त्रैमास वितरणअनुसार संस्थाले समीक्षा अवधिमा खुद नाफा ६ करोड ९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा संस्थाले ३ करोड २७ लाख...
प्रभू बैंकको लोभलाग्दो प्रगति: नाफामा १०२% को छलाङ, १९% लाभांश बाँड्नसक्ने
काठमाण्डौ । खराब संस्थाहरुलाई गाभेर अगाडि बढिरहेको प्रभू बैंकले आफ्ना प्रमुख वित्तीय सूचकमा लोभलाग्दो सुधार गर्न थालेको छ। यो बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १९.४९ प्रतिशतको लाभांश क्षमता बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्म बैंकले १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको हो । बैंकले यो अवधिमा २...
वोमी लघुवित्तको रु. १०.१० करोडको हकप्रद सेयर आजबाट निश्कासन
काठमाण्डौ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले आज बिहीबारदेखि रु. १०.१० करोड मूल्यबराबरको हकप्रद सेयर निश्कासन गरेको छ । वोमी लघुवित्तले प्रतिकित्ता रु. १०० रुपैयाँ अंकित दरका १० लाख १० हजार ८८० कित्ता हकप्रद सेयर निश्कासन गरेको हो । सतप्रतिशत हकप्रदपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी बढेर २० करोड २१ लाख ७६ हजारको उचाईमा पुग्नेछ...
नेसनल माइक्रोफाइनान्सको खुद नाफामा ५३.२८ ले वृद्धि, रिजर्भमा झन्डै सतप्रतिशत छलाङ
काठमाण्डौ । नेसनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमास विवरण अनुसार अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा झन्डै ५३.२८ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । संस्थाको सार्वजनिक चौथो त्रैमास विवरण अनुसार संस्थाले समीक्षा अवधिमा खुद नाफा रु १३ करोड १४ लाख आर्जन गर्न सफल भएको छ । जुन अघिल्लो वर्ष यही...
बोमी लघुवित्तको नाफामा ५५.८६ प्रतिशतले वृद्धि, प्रतिसेयर आम्दानी रु ६२
काठमाण्डौ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमास विवरण अनुसार अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा झन्डै ५५.८६ प्रतिशत खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । संस्थाको सार्वजनिक चौथो त्रैमास विवरण अनुसार संस्थाले समीक्षा अवधिमा खुद नाफा रु ६ करोड २७ लाख गर्न सफल भएको छ । जुन अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा संस्थाले रु ४ करोड २ लाख...
काठमाण्डौ । चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ कौ चौथो त्रैमासमा अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा १७६ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । अन्य सूचकमा पनि उत्साहजनक प्रगति गरेको छ । संस्थाको समीक्षा अवधिमा खुद नाफा रु. २.८२ करोड रहेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रु. १.०३ करोड रहेको थियो । संस्थाले व्यवसाय...